ngephutha Abaningi bakholelwa ukuthi ukwenza efulethini a ikontraga akunzima kangako, ikakhulukazi i-Internet ungathola amakhulu ongakhetha nezibonelo yalesi sivumelwano. Nokho, uma sicabanga ukuthi usebenze kabanzi, kumele kuphetfwe ukuthi izinkinga ezithile nokho ungakwazi, futhi uma ungazi ukubona izimpawu ezifihlekile ezicatshangelwayo zale nqubo, ukuze sigweme izinkinga futhi izingxabano bekuyoba nzima.
Kungakhathaliseki ukusebenzisa inkontileka eyejwayelekile?
abameli abanolwazi bathi inkontileka imodeli akukwazi. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa inkontileka esezingeni omsebenzi esimweni esithile siyinto engenakwenzeka. Ngokuvamile ukusebenzisa isivumelwano imodeli kuphela azuzwe uma sikhuluma inkontileka sokuqashwa yezenhlalakahle izindlu, kodwa lokho kuhlukile endabeni. Ngokuphathelene okwenziwe nokuqashwa zokuhlala (kwezinye izakhiwo), okuyiwona kuphela imithetho okungenani ku amakhodi civil kanye nezindlu. Kule ndaba, zonke lezi amadili ayecishe ngabanye. Nokho, kukhona ukufana jikelele bonke izinkontileka zokuqashwa zabo zokuhlala nezinye ingcebo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi imithetho Civil Code ngokuyinhloko nokuhloswe ngazo ukuvikela umqashi, hhayi umnikazi impahla, kodwa noma kunjalo, ikontraga zokuhlala kumelwe bavikele izithakazelo zombili, kuhlanganise umninindlu. Isivumelwano ikhomba izenzo nemiphumela uma kwenzeka izimo ejwayelekile kakhulu. Lokhu kubaluleke kakhulu ukuze bakwazi ukuxazulula ukungaboni ngaso linye lapho ngaphansi kohlelo lula, okungukuthi, e-oda pretrial. Uma inkontileka utawubhalwa ngendlela efanele, akusadingeki ukuya enkantolo, okuyinto Uyoqeda izingxabano phakathi kwezinhlangano.
I ikontraga: kuphi ukuqala?
Ake sibheke nezimo ezibaluleke kakhulu futhi izikhathi inkontileka efulethini ukuqasha (ezinye impahla). Okokuqala, leli phephandaba kumele ubhalise yonke imininingwane amaqembu. Kuyinto kunjalo ukuthi idatha eziphindaphindekayo alikho. Cacisa amakheli, izinombolo zezingcingo, ungenza amakhophi sivumelwano yephasiphothi yakho kanye neminye imibhalo.
Abaqashi kufanele ukujwayelana imibhalo efulethini futhi uqiniseke ukucela ukukhombisa esitifiketini sokubhaliswa amalungelo komhiaba ukwakha izindlu. Inkontileka nokuqasha efulethini kumele mathupha ngemvume umnini wayo. Yonke idatha ebekiwe inkontileka kumele kuhambisane idatha kuboniswe iphasiphothi.
Uma kukhona abanikazi eziningana impahla ukuthi aqashiwe, inkontileka esayinwe yiwo wonke la abantu. Uma isivumelwano ihlela ngemvume nomnikazi oyedwa kuphela, khona-ke kufanele nginazo amandla kwasayinwa lommeli. Ulwazi mayelana nale dokhumenti kufanele senziwe inkontileka.
imigomo Isifundo yesivumelwano
I ikontraga kufanele licaciswe ngale ndaba. Kulokhu, isihloko, yebo, ngeke kuqashwe efulethini. I Civil Code wabuye wathi nokuqasha ngenkontileka welinye ifulethi kungaba yesikhathi esifushane (1 nonyaka) futhi yesikhathi eside (1 kuya ku 5 iminyaka). Ngisho noma umnikazi we impahla uhlela ukuthatha isikhathi eside, kungcono namanje ukuphothula isivumelwano lumelele unyaka, emva kokuphela kwalesi sikhathi lungaboniswa.
Isivumelwano okudingekayo ukuze usethe intengo. Kufanele kuphawulwe ukuthi amaphutha amaningi kuleli qophelo. Zonke intengo engabelwe izindlu eziqashisayo, kodwa abasho lutho ngaleso yokukhokha amasevisi ishayise. Kule ndaba, ngamunye amaqembu usungaqala ulichaze ehlukile. Ngokuvamile, lemali nyangazonke ngokuqasha ifulethi kufanele kakade kuhlanganiswe nemali ekhokhelwa amanzi, ugesi, igesi, ngocingo, internet nokunye. D. Nokho, ungabhalisa lesi sihloko akhokhe eceleni, ngoba izindleko la masevisi zincike ezidingweni womqashi.
Isivumelwano of ukuqasha kwezakhiwo, zokuhlala, izindlu kufanele futhi aqukethe isigaba ngosuku lokukhokha nyangazonke. Ngokuvamile, leli nani ikhokhelwa kusengaphambili, ngenyanga kusengaphambili. Isikhathi ukubala uvame kunqunywa emva sokuxazulula abaqashile. Nokho, ukuze kube lula, ungasetha omunye umnqamulajuqu, njalo lokuqala lwenyanga isibonelo.
Kaningi e isivumelwano somsebenzi uveze iphuzu mayelana nokwenzeka izinguquko intengo. Kulokhu, setha kwesikhathi lemali kungase kushintshwe, futhi ukunquma oda ushintsho yayo. Yiqiniso, cishe ngaso sonke isikhathi kuziwa ekuthuthukiseni izindleko, ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi ukwenza leli phuzu ukulalelisisa kakhulu.
Nqamula nokuqashwa inkontileka ka indawo kusengaphambili umnikazi ngeke ukwazi. Kule ndaba zihlanganisa umushwana ezifanayo isivumelwano akudingekile, njengoba kuyodingeka akawona amandla ngokomthetho. Ngesikhathi esifanayo, ukwehluleka ukufeza izibopho ebekiwe inkontileka (ukulimala kwempahla, ukuntuleka yokukhokha ye-efulethini, nokunye. D.) On the ingxenye umqashi unikeza umninindlu ilungelo kufunwe ekunqanyulweni kuthengiselana.
Kubalulekile ukwenza iphuzu ikontraga ku inqubo ngokwenza izinguquko kudokhumenti, mayelana yisibopho amaqembu, ukukhokhela ukumangala okungenxa esusela umninindlu futhi eyisakhamuzi.
Isijobelelo ukuze inkontileka
Ngokuvamile, ngesisekelo inkontileka imodeli kungathatha indawo yokuhlala efulethini. Ifomu yesivumelwano kufanele iqukathe zonke ababezozidinga kudingeka the Civil Code. Kodwa ngesikhathi esifanayo kuzomele wenze esinye isicelo isivumelwano ulwazi mayelana abaqashile eziyobe ziphila ne eyisakhamuzi. Ngo isicelo esinjalo kufanele lifake amalungelo nezibopho idatha iphasiphothi.
Ngaphezu kwalokho, lesi sivumelwano kudingeka wenze isenzo ukwamukela ukudluliswa. Lo mbhalo uqinisekisa ukuthi ubunikazi kanye umthwalo izindlu wasuka umnikazi ukuba eyisakhamuzi. Owenza isenzo esinjalo luyisisekelo ukubuya umqashi lemali izibambiso ukuthi ikhokhwe ngosuku ofike indlu.
Umehluko ukuqasha kanye intela
Kufanele kuqashelwe ukuthi inkontileka ukuqasha futhi isivumelwano sokuqasha - kungcono izinhlobo ezahlukene ukuthengiselana. Bona, ngokukhethekile, zingafani Ukwakheka kuncike futhi uhlobo izakhiwo. Ngokwesibonelo, ukuqasha ikhishwa ezimweni lapho ukukhokhiswa aqashiwe izakhiwo zokuhlala. Iphinde isetshenziselwe lapho izindlu idluliswe enhlanganweni engokomthetho ukusetshenziswa okwesikhashana. Uma zokuhlala sokunikela iyiphi inkampani, akudingeki bangena esivumelwaneni commercial nokuqashwa zokuhlala, kanye inkontileka ka ngokuqasha ifulethi. Uma izindlu udluliselwa ukusetshenziswa isakhamuzi, kuyinto kuphela ikontraga.
Lezi zici kudingeka kucatshangelwe. Isikhathi esining impela kule ikontraga side izindlu bazibiza "umnikazi" futhi "eyisakhamuzi" okungukuthi sibi. Uma isivumelwane waphetha eyenzelwa abantu ngabanye, izinhlangano lenkontileka kungenzeka kuphela umnikazi futhi eyisakhamuzi.
ilungelo lokuhlala kuwo isivumelwano Sample
Kulesi sihloko, sasiyihlanganisa imithetho eyisisekelo ezikhona maqondana inkontileka sokuqasha. Esimweni ngasinye sihlukile, futhi noma yisiphi isivumelwano isidingo sokwenezela izimo ezehlukene ukuze concretize isimo sakho futhi awaphikisani umthetho. Wena, isimiso, kungathatha ifomu asondele futhi kwenze kube ngesisekelo a nokuqasha ngenkontileka welinye ifulethi. Isampula ngeke kuphela ukukopela ishidi, kodwa hhayi isivumelwano ngomumo ukuthi ungakwazi nje uzitholele futhi usheshe ngemvume ke. Kungaba kuphela ngesisekelo phezu kwayo wena uyokwenza inguqulo yesivumelwano, ikhumbula izici umcimbi wakho. into enjalo - into sina, futhi, yebo, awanakubhalwa ekhasini elilodwa.
Isikhathi esining impela, umqashi kanye umnikazi komhiaba akusho bahlelekela inkontileka ngokubhala, ngaleyo ndlela sigweme iphutha elingathí sina. Ngaphandle kwesivumelwano kungase kuqubuke izinkinga njengoba lezi zakhamuzi, futhi renter, ngoba kukhona ngokuphelele ngokomthetho ungazivikele. Abaqashi, isibonelo, kungonakalisa ikamelo esasisanda kuyilungisa, azenzele ifenisha ephambili noma kwezinye izinto, nangenxa ukuthi ukushushisa kubo bekuyoba nzima ngaphandle inkontileka. Abaqashi ingaphinda kabi hit. Ngokwesibonelo, umninikhaya kungadinga ngokungenangqondo baphume efulethini noma kwenzeke ngokuphazima kweso ukukhulisa nezintela. ebhaliwe inkontileka waphetha kuphela ongavikela bobabili kuthengiselana. Uma kukhona ngokuphumelelayo wenza isivumelwano kungenzeka ngisho ukuba axazulule izingxabano ngaphandle kokuya enkantolo, okuyinto njalo ngakwesokunene futhi umninindawo, nabaqashi.
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi ikontraga noma indlu cottage kuyafana nokuqashwa inkontileka welinye ifulethi. Umehluko, njengoba umthetho, siqukethe kuphela yokuthi okuzungeze izakhiwo umuntu ezweni Ungahambisa noma ukunganyakazi ukusetshenziswa okwesikhashana yomqashi.
Isigaba Land nokusetshenziswa kuvunyelwe. Uhlobo umhlaba - ezweni nemizana
Ngiyithola kanjani a ukukhubazeka?
Ukuhlaziywa Batiushkov inkondlo "ngqondongqondo wami." bewathanda phakade
Pharyngitis e ingane: izimpawu, ukwelashwa. Kanjani ukusiza ingane yakho?